သတင်းများ - HDMI Output 4K Zoom Block Camera Module
View Sheen က ဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်။အထူးသဖြင့် UAV သို့မဟုတ် ဒရုန်းအတွက် ဇူးမ်ဘလောက်ကင်မရာ.
ဘာကွာသလဲ။ဒရုန်း zoom ကင်မရာ moduleပြီးနောက်zoom ပိတ်ဆို့ကင်မရာCCTV အတွက်လား?
1. ဗီဒီယိုနှောင့်နှေးမှုကို လျှော့ချရန်အတွက်၊1080p UAV ဘလောက်ကင်မရာ မော်ဂျူးပုံမှန် 1080P@50fps/60fps မြင့်မားသော ဖရိမ်နှုန်းအဖြစ် တပ်ဆင်ထားသည်။၎င်းသည် CCTV ကင်မရာအတွက် ရွေးချယ်နိုင်သည်။
2. HDMI ရုပ်ပုံထုတ်လွှင့်မှုနှင့် သဟဇာတဖြစ်စေရန်အတွက်၊ UAV ဘလောက်ကင်မရာသည် ကွန်ရက်နှင့် HDMI ဗီဒီယိုများ၏ တစ်ပြိုင်နက်အထွက်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။CCTV ကင်မရာသည် အများအားဖြင့် network output သို့မဟုတ် LVDS output ဖြစ်သည်။
3. ထိန်းချုပ်မှုလင့်ခ်များသည် မတူညီပါ။UAV တွင်၊ ထိန်းချုပ်မှုအမိန့်ကို အများအားဖြင့် မြေပြင်မှ gimbal ၏ control panel သို့ပေးပို့သည်။gimbal သည် serial port မှတဆင့် ကင်မရာကို ထိန်းချုပ်သည်။ထို့ကြောင့် UAV ကင်မရာသည် VISCA ပရိုတိုကောကို အသုံးပြု၍ စီးရီးအပေါက်ကိုသာ အသုံးပြုသည်။ဤအမှတ်စဉ်အပေါက်သည် UAV အတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသော ရိုက်ကူးမှု၊ ဗီဒီယိုနှင့် အခြားအမိန့်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
CCTV Camera ၏အသုံးချမှုတွင်၊ ထိန်းချုပ်မှုအမိန့်ကို network command မှတဆင့် block camera သို့ပေးပို့လေ့ရှိသည်။ကင်မရာသည် PTZ နှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ရန်အတွက် အမှတ်စဉ်အပေါက်နှစ်ခုကို အသုံးပြုသည်။အမှတ်စဉ် ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုသည် VISCA ပရိုတိုကောကို အသုံးပြုသည်၊ အခြားတစ်ခုသည် PELCO ပရိုတိုကောကို အသုံးပြုသည်။
4. ဖွဲ့စည်းပုံ မတူပါ။UAV ဗားရှင်း၏ အလေးချိန်ကို လျှော့ချရန်အတွက် အခွံမရှိပါ၊ PCB ဘုတ်ကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ကွင်းပိတ်ကိုသာ အသုံးပြုပါသည်။
စီးရီးတစ်ခုလုံး ပါဝင်သည်။30x 2mp ဒရုန်း ချဲ့စက် မော်ဂျူး, 30x 4K ဒရုန်း zoom မော်ဂျူးနှင့်အာရုံခံကင်မရာနှစ်ခု (30x zoom module နှင့် 640*512 အပူကင်မရာ)နှင့်အခြားထုတ်ကုန်များ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
Long Zoom Camera Max Optical Zoom ကင်မရာ 30x Zoom Camera Mdule Network Zoom Camera Module zoom ကင်မရာ module အပူချိန်ကင်မရာ